Cilmiga Suuqgeynta Jim Irsay | Martech Zone
Isniin, Janaayo 3, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Gowraca Robby
Axadii, Indianapolis Colts ayaa ka adkaaday Tennessee Titans si ay u noqdaan AFC South Champions. Ciyaarta ka hor, si kastaba ha noqotee, milkiilaha Colts Jim Irsay wuxuu olole suuq geyn gabi ahaanba cajiib ah ka sameeyay Twitter.
Haddii aydnaan ku jirin faahfaahinta, aan dib u eegno qoraallada Irsay ee Diseembar 31st:
IN LAGU GUULEYSTO PRIUS IYO $ 4K — 1: 15 pm galabnimo maanta oo Axad ah waxaa jiri doona Prius madow oo la dhigi doono fagaaraha bannaanka waqooyiga ee ka baxsan garoonka Lucas Oil Stadium…
IN LAGU GUULEYSTO PRIUS IYO $ 4K — Dadka soo galaya waa inay ahaadaan 18 sano iyo wixii ka weyn WAANA la socda @jimirsay barta Twitter.com…
SI AAD UGU GUULEYSATO PRIUS IYO $ 4K — HAL gelitaan qofkiiba, galitaanno badan ayaa kuu qalmi doona (maaha kaftan)!…
SI AAD UGU GUULEYSATO PRIUS IYO $ 4K — 1-da duhurnimo ee maanta oo Axad ah waxaan soo qori doonaa su’aal. Waad ku soo gali kartaa adoo tweet gareeya jawaabtaada.
SI AAD UGU GUULEYSATO PRIUS IYO $ 4K -Ur tweet WAA INAAD ku jirtaa magacaaga sida ugu muuqata liisanka darawalnimada OO aad ku darto @jimirsay IYO #gocolts.
Aynu diidno faa'iidooyinka muuqda ee noocan ah kor u qaadista. Waqti kasta oo aad bixiso abaalmarin qaali ah, waxaad soo saareysaa guux fara badan iyo xiisaha astaanta. Waxaad xoojineysaa daacadnimada. Dad badan ayaad ka farxisaa, qofna aad buu u faraxsan yahay. Tartanku badanaa waa weyn yahay.
Laakiin kooxda suuqgeynta ee Colts waxay wax ka qabatay gabi ahaanba ololahan, wax qaali ah oo waqti ku qaadanaya in si kale loo sameeyo: Waxay ku wareejiyeen liistada saxda ah ee taageerayaasha Colts iyo Twitter.
Ka fikir arrintaas! Suuqgeyn weyn ayaa u baahan xog nadiif ah, sax ah, iskutallaab tixraac ah. Horumarinta tikniyoolajiyadaha cusub sida Twitter-ka waxay ka dhigan tahay inay jiraan habab cusub oo dadka lagu gaarsiiyo, laakiin isla markaa, si weyn ayey faa'iido u leedahay in la awoodo in lagu xiro taageerayaasha xisaabaadka Twitter.
U fiirso, tusaale ahaan isticmaalaha Twitter @ Duulaankiro96. Waad u sheegi kartaa inuu yahay taageere weyn oo NFL ah kaliya akhrinta Tweets. Laakiin ma jirto hab lagu ogaado qofka uu yahay, maadaama isticmaalehan uusan magac ku bixin cinwaankiisa Twitter-ka. Xaqiiqdii, dad badan ayaa adeegsada naanays, magac hore ama naanaysta internetka. Ma jirto hab fudud oo looga gudbi karo dhammaan xogta rasmiga ah ee laga yaabo inaad ku leedahay qof, sida taariikhda wax iibsiga, keydka macluumaadka suuq geynta, iwm.
Laakiin hadda, Jim Irsay (iyo qof walba) wuu ogyahay in @ DeadStroke96 yahay George Ketchman. Waxay umuuqataa boqolaal - hadaanay kumanaan ahayn - dad si iskood ah u bixiyay xog nadiif ah oo sax ah tartankan. Madax u noqo Raadinta Twitter si aad adigu u aragto. (Waad raadin kartaa "#gocolts @jimirsay kubbadda cagta" si loo soo koobo natiijooyinka.)
Mid ka mid ah hababka ugu fiican in la kordhinta wax soo saarka waa in shaqada loo wareejiyo dadka kale. Colts wuxuu ku qaadan lahaa saacado aan tiro lahayn raadinta dhammaan taageerayaasha Jim Irsay, adoo fiirinaya astaamahooda iyo qoraalkooda si ay isugu dayaan una go'aamiyaan magacyadooda sharciga ah oo buuxa. Ama, way tartami karaan isla tartankii ay doonaan, oo dadka haloo daayo shaqada naftooda.
Shaqo wanaagsan, Jim Irsay iyo kooxda suuqgeynta ee Colts!
Tags: dameerrojim irsaymarketing
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 3:20 PM
Laakiin…. ma waxay ahayd $ 30,000? Waxna ma ku qaban doonaan xogta?
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 5:24 PM
Waa fikrad aad u fiican… laakiin waa maxay ROI? Markii ugu horreysay ee aan aqriyo qoraal ku saabsan dallacaadda Sabtiga @jimirsay wuxuu lahaa qiyaastii 18,000+ taageerayaal Waan hubiyey oo hadda waa 20,000 +. Qiimaha ma wuxuu ahaa qiimihiisu laba kun oo taageerayaal cusub ah?
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 6:11 PM
Waxaan ka shakisanahay in kharashku xitaa ku dhowaa $ 30k. Waan ognahay inay ahayd ugu yaraan $ 4k oo kaash ah. Waxaa suurtagal ah inay ku heleen gaariga kharash la'aan toos ah haba yaraatee iyada oo lagu beddelay qaar ka mid ah ganacsiga suuqgeynta.
Haddii Colts isticmaalaan xogta, markaa haa, waxay gabi ahaanba u qalantaa $ 4,000. Waxay qaadan doontaa koox aad u tiro badan toddobaadyo si ay uga gudbaan tixraaca dhammaan taageerayaasha Irsay dadka dhabta ah ee dhabta ah, taasna ma dabooli doonto isticmaaleyaasha badan ee Twitter ee aanad garan karin aqoonsigooda.
Dabcan, waxaa jira hal macluumaad oo dheeri ah: Qof kastaa wuu heli karaa liiskan hadda, ma ahan oo keliya Colts. Taasi waa inay wax kale kaaga sheegtaa ololahan.
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 10:37 PM
Sidoo kale waa inaad ku xaddidaa kharashka 'kooxda la qiyaasi karo' markaa. Waxaad dhahdaa waxaad tixraaci kartaa 1 qof 3dii daqiiqaba, ama saacaddii 20. Loogu talagalay dadka raacsan 20,000, waxaad fiirineysaa 1000 saacadood oo shaqaale ah. Ku tuur taas macquul $ 10 / saacaddii gelitaanka xogta, adiguna waxaad ku jirtaa $ 10,000 oo kale kharash ahaan. Hadda waxaad ku soo noqotay $ 14,000 haddii gaadhigu lacag la’aan yahay, $ 30,000 + haddii ay tahay qiimo dhimis.
(Oh, oo waad fiicnaan laheyd inay bilaabaan maanta kahor intaan la raadin.twitter.com waxay tirtirtaa dhammaantood hal toddobaad qiyaastii hahahaha! 🙂)
Waxaan u maleynayaa in Irsay uu ku weyn yahay dhisida buuqa, dadka hadal haynta, iwm. Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen jeclaan laheyn inuu isaga ka faa'iideysto xogta sida ay noqon karto iyo sida ay noqon karto, laakiin xaqiiqda dhabta ah uma maleynayo inay dhaceyso.
Waa maxay ujeedkiisa ugu weyn? U oggolow dadka inay ka hadlaan oo ku faraxsan yihiin Colts (iyo isaga), oo sii wad inaad muujiso inuu haysto lacag badan oo uu wax ku bixin karo. Miyuu taas ku guuleystay? Yup.
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 10:22 PM
ROI isnt kaliya taageerayaasha Twitter Steve. Ma jirto hab aad ku cabbiri karto ROI oo ah wax hoos u dhaca sidan oo kale ah. Maaha inta taageerayaal ah Irsay ay ka heshay wajiga urur caan ka ah magaalada oo dhan. Heck waxay ugu dhowdahay inay u qalanto dhammaan baararka ay ka helayaan suuqgeynta suuqgeynta sida annaga oo kale. Ciyaaraha si fiican ayaa loo sii iibiyaa ka hor marka laga reebo iibka ganacsiga, Colts ma haystaan ​​qol ay ku horumariyaan ROI-ga ay dhahaan.
Guutooyinku waxay dakhli ku heli karaan tikidhada… laakiin xoogaa yar ayaa laga helaa kafaalaqaad. Damaanad-bixiyeyaashu waxay bixiyaan lacag tiro badan. Si ka duwan shirkad caadi ah, taageerayaasha kooxaha isboortiga ayaa ku dhagan. Marka su'aal kafiican waxay noqon kartaa - waa maxay nolosha uu leeyahay taageere Colts…. oo Jim Irsay ma sameeyay wax taageerayaal ah oo Colts ah isagoo sidan samaynaya? Waxaan u maleynayaa inuu haysto. Dadku way ka daaleen kooxaha had iyo jeer qaadanaya… tani waa tilmaam fiican oo ah in wax yar dib loo celiyo.
Jan 11, 2011 saacadu markay ahayd 2:45 PM
Maahan wax ku saabsan ROI, kuwa raacsan, ama qiimaha. Waxay ku saabsan tahay qulqulatooyinka egomaniacal ee bilyaneer leh lacag ka badan dareenka. Runtii waxaan ula jeedaa… wuxuu ku bixiyay $ 1M gitaarka Jerry Garcia. Runtii ma u malaynaysaa inuu ka walaacsan yahay $ 30k?
In kasta oo aan ku raacsanahay in lacagta iyo caqligu aanay waxba wadaagin, haddana ma hubo in aan oggolahay in Irsay uu yahay egomaniacal. Xaaladaha badankood, Irsay wuxuu sameeyay wax walba oo suurtagal ah si looga fogaado iftiinka. Waxaan la shaqeeyaa qaar inbadan xiriir la leh waxayna ii sheegeen inuu yahay nin layaableh oo qalbi jilicsan. Haddii aad xoogaa baaris ah sameyso, waxaad ogaan doontaa inuu hay'addo badan oo samafal ah sii wado halkan Indiana.
yaa dhab ahaan ku guuleystay gaariga?
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 3:32 PM
Waxaan la socdaa Brad midkan, nooc ka mid ah. Robby wuxuu qabaa fikrad weyn oo ah in Colts ay ka faa'iideysan doonaan macluumaadka. Waxaan ahay shakisanahay sida ugufiican wajigaas markaan arko madaama ay leeyihiin mid kamid ah kuwa uguxun (maxaa yeelay waa wax aan jirin) waxay kusugan yihiin goobta bulshada ee koox taageere ah Haatan waxaa la siiyay taageerayaashooda wax badan oo ka mid ah dalabkooda iyaga khadka tooska ah waana sax ok laakiin hadda Irsay wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qorayaa wacyigiisa wuxuuna bixinayaa tigidhada iyo gawaarida macnaheedu maahan in ururku soo hagaagay. Xuduudaha tartanka ayaa tilmaamaya qof leh aqoon Twitter-ka ah oo dhegta Jim galaya. Waxaa laga yaabaa in Doug iyo saaxiibkiis Pat Coyle ay ula hadli karaan Colts sidii urur ka fiican kan aan ka nahay.Qiimaha kale ee tan ku jira waa kuwa mustaqbalka kafaala qaadi kara. Toyota waxay ka heleen baarar aad u wanaagsan tan, in kasta oo ay caawinaad dheeraad ah ka heli lahaayeen Jim, kuwa wax iibiya ee maxalliguna u badan tahay inaysan dhiirrigelin oo ay uga faa'iideystaan ​​sidii ay kari lahaayeen Shirkad aqoon u leh arrimaha bulshada oo raadineysa inay la shaqeyso Colts-ka ayaa xoqin doona guntooda heshiis sidan ah. Kharashka loo yaqaan 'Colts' waxay u badan tahay inuusan ahayn wax baabuur ah ama si aad ah loo dhimay sababtoo ah iskaashiga Toyotas ee kooxda (baabuurka waxay u badan tahay kooxda ka yar $ 20k haddii ay bixiyaan) Kooxda Colts koox ahaan ayaa heli lahayd culeys badan haddii abaalmarinta ay ka badnaan laheyd ku habeysan hareerahooda & wax soo saarkooda laakin sumcadda waxba uma dhimeyso. Waa wax aad u wanaagsan in la arko tweets-ka Irsay oo aan la sifeyneyn laakiin dhanka aragtida suuq-geynta weli waxaan arkaa fursado badan iyo qol horumar ah.
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 6:07 PM
Ama waxaa laga yaabaa in Robby carrabkiisu si adag dhabankiisa ugu hayo.
Hadday sidaas tahay, si fiican u ciyaaray mudane.
Jan 3, 2011 saacadu markay ahayd 10:24 PM
Jan 11, 2011 saacadu markay ahayd 2:43 PM
Waa bilyaneer. $ 30k ayuu ku bixiyaa sariirta markuu ka soo kacayo. Dhab ahaan, maahan lacagta. Waxay ku saabsan tahay ego.
Aad u qurux badan waxaan dhihi lahaa.
Marka loo eego xeerarka bixinta / lacag bixinta Jim Irsay, qoraalka loo baahan yahay in lagu daro magacaaga maadaama uu ka muuqdo liisankaaga darawalnimada. In kasta oo tani u noqon karto ujeeddooyin macdan-baaris, waxaan u maleynayaa inay ahayd in laga hortago qishka. Wuxuu lahaa xaddidaad qof-qof-tweet ah; waxaa lagaa reebay qoraallo badan oo tweets ah. Sharciga "magaca buuxa" wuxuu niyad jabiyay maleyn badan oo ka timid qof leh akoonno badan oo Twitter ah.
Jan 11, 2011 saacadu markay ahayd 2:41 PM
Ma haysto sabab aan ku aamino inay jiraan wax caqli gal ah oo ka dambeeya dalacaadda. Shil farxad leh, laakiin maahan hanad.
Jan 15, 2011 saacadu markay ahayd 6:54 PM
Had iyo jeer waa is-hoosaysiin marka qof caan ah (@jimirsay) uu ku biiro Twitter-ka oo uu ka sarreeyo tirada raacayaasha ay kugu qaadatay sannado inaad uruursato… toddobaadyo gudahood!